Ny maha-zava-dehibe ny birao fifanakalozan-kevitra amin'ny Internet amin'ny fianarana
Home » Vaovao momba ny dia momba ny fanabeazana » Ny maha-zava-dehibe ny birao fifanakalozan-kevitra amin'ny Internet amin'ny fianarana
Miaina amin'ny vanim-potoana niomerika isika, izay misy ny tsindry iray monja. Ny taonan'ny TIK dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny sehatra maro, anisan'izany ny fanabeazana. Ny fianarana dia miroso amin'ny dingana tsy misy taratasy, fiaraha-miasa bebe kokoa ary fandrosoana ara-teknolojia. Iray amin'ireo fiasa nomerika ampiasaina amin'ny fianarana ankehitriny ny tabilao amin'ny Internet. Izany dia manondro sehatra an-tserasera ahafahan'ny mpianatra manao dinidinika. Ampahany amin'ny fotoam-pianarana an-tserasera izy io, ahafahan'ny mpianatra manoratra ny heviny, izay hitan'ny mpianatra hafa.
Ny tabilao fifanakalozan-kevitra an-tserasera ihany koa dia manana fiasa mifanatrika mivantana. Ny sehatra toy izany dia mandrisika ny fifanakalozan-kevitra ara-pahasalamana sy amin'ny lohahevitra izay mameno tsara ny fomba fampianarana mahazatra. Ireto ambany ireto ny tombontsoa miavaka sasany.
Manatsara ny fiaraha-miasa izany
Ny mpampianatra dia afaka mangataka amin'ny mpianatra hizara ny naotiny mba hamoronana fanangonana feno amin'ny alàlan'ny tabilao fifanakalozan-kevitra amin'ny Internet. Mizara ny hafatr'izy ireo tsy manam-paharoa ny mpianatra, manampy hevitra vaovao mety tsy hanana mpianatra hafa. Amin'izany fomba izany, ireo mpianatra izay tsy manana foto-kevitra tena ilaina ao amin'ny naotiny dia afaka miditra an-tsoratra feno hatrany.
Ireo mpampianatra dia manana fidirana amin'ireo naoty ihany koa. Araka izany, afaka manara-maso ny dinika izy ireo ary manampy izay tsy eo. Azon'izy ireo atao ihany koa ny manazava izay tsy fahazoan-kevitra, mizara loharanom-pahalalana mahasoa toa azy ireo WritingPaper, na ahintsy izay hafatra. Araraoty ihany koa ny fidirana amin'ireo mpianatra izay mety hiatrika fahasahiranana amin'ny fanoratana.
Mamporisika ny fiaraha-monina
Ny fifanakalozan-kevitra amin'ny kilasy ara-batana dia misy tombony azo amin'ny fiainana. Ny ankamaroan'ny mpampianatra sy andrim-pianakaviana dia mifanohitra amin'ny fomba fampianarana an-tserasera satria manahy izy ireo fa tsy dia mifanerasera firy ny mpianatra. Tsy azon'izy ireo ireo fotoana miboiboika alohan'ny sy aorian'ny fotoam-pianarana satria ny mijery ny efijery fotsiny no ataon'izy ireo. Ny tabilao fifanakalozan-kevitra an-tserasera dia manome vahaolana tena tsara ho an'izany. izy ireo avelao ny mpianatra hanao dinika tsy ara-potoana ary tazomy ny fifanakalozan-kevitra ao an-dakilasy. Ho an'ny mazava dia afaka mamorona tabilao fifanakalozan-kevitra isan-karazany ianao amin'ny adihevitra an-tsekoly sy ny asa tsy ara-potoana. Hamarino tsara fa ny anarana sy torolàlana ho an'ny tsirairay dia mampiseho ny karazana fifampiraharahana andrasana.
Ireo mpampianatra dia afaka mandresy lahatra dinika amin'ny dinika ary mibaiko ny karazana resaka. Ohatra, ao amin'ny vondrona tsy ara-potoana dia azon'izy ireo atao ny mangataka amin'ny mpianatra handefa ny sarin'ny biby fiompy. Tompon'andraikitra amin'ny famolavolana modely ny mpampianatra.
Toerana fampisehoana an-tserasera
Afaka mandefa ny sangan'izy ireo amin'ny forum an-tserasera ireo mpianatra, ahafahan'ny mpianatra hafa mifanerasera amin'ny sanganasan'izy ireo. Ireo mpampianatra dia afaka mamorona lohahevitra ifanakalozan-kevitra izay ahafahan'ny mpianatra mizara kofehy amin'ny sanganasa semester. Ireo mpianatra hafa dia afaka tonga eo amin'ny habakabaka mba hahazo aingam-panahy na hanome hevitra momba ilay asa. Afaka mifandray mivantana amin'ireo mpianatra ihany koa izy ireo ary mamporisika azy ireo. Ireo mpianatra manana olana toa ny tahotra an-tsehatra na fidirana an-tsokosoko dia mety handray soa be dia be avy amin'ireo endri-javatra ireo. Ny introverts sy ny extroverts dia manana fotoana mitovy amin'ny fandraisana anjara.
Fomba fijery misimisy kokoa
Ny fifanakalozan-kevitra an-tserasera dia tsy misy fetra toy ny toerana. Azonao atao ny mifanakalo hevitra amin'ny olona amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao amin'ny fampiononana ao an-tranonao. Izany dia miteraka toerana ho an'ny hevitra maro samihafa. Ny olona tsy mitovy fiaviana sy kolontsaina dia samy manana ny fomba fijeriny momba ny lohahevitra. Tombony lehibe io, indrindra ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo na rafi-pampianarana ambony hafa. Rehefa mametraka fanontaniana toy ny fomba fanoratana lahateny tsara ianao dia mahazo valiny samihafa, izay mampitombo ny lanjan'ilay fifanakalozan-kevitra.
Ny fahafaha-mifehy ny fifanakalozan-kevitra
Misy foana io olona io izay manao fanamarihana tsy mendrika amin'ny fifanakalozan-kevitra manorina. Nataon'izy ireo izany hanodinkodinana ny sain'ny mpianatra hafa na hisarihana ny saina. Amin'ny toerana ara-batana dia mety tsy ho mora ny mifehy ny fiheverana toy izany. Ao amin'ny tontolon'ny Internet, misy fampiasa sasantsasany mamela ny mpitantana hametra ny fifandraisana amin'ny olona iray. Ny mpandray anjara hafa koa dia afaka tsy miraharaha ny fanamarihana avy amin'ireo mpianatra mikorontana. Ireo mpampianatra dia tsy mila mandany fotoana be dia be amin'ny fitarihana ny adihevitra.
Alao an-tsaina ny fahafaha-manatrika ny fampianarana an-dakilasy eo amin'ny sezalanao sy ny akanjo fitanao. Izany no karazana fampiononana entin'ny birao fifanakalozan-kevitra amin'ny Internet. Ny mpianatra sy ny mpampianatra dia tsy mila mandao ny tranony vao mankany amin'ny efitrano fianarana biriky sy feta. Matetika no mandreraka sy mahasosotra ny mandeha any am-pianarana. Ny fitadiavana ny fitaterana sy ny fifampiraharahana amin'ny olona eny an-dàlana dia mety hiteraka fanahiana. Manampy ny isan'ny olana ilain'ny mpampianatra izany.
Ny tabilao fifanakalozan-kevitra an-tserasera dia manampy ny mpianatra hianatra amin'ny fiononan'ny tranony sy ao anatin'ny fandaharam-potoanany. Fanampin'izany, ny fikorontanana ao an-dakilasy toy ny fiatoana amin'ny fandroana, ny fanaovana pensilihazo, ny famafana boky sns. Mifantoka bebe kokoa amin'ny fianarany ireo mpianatra.
Fahalalahana bebe kokoa
Amin'ny dinika nentim-paharazana iray tany am-pianarana, mpianatra sasany no manjaka amin'ny resaka. Ny mpianatra sasany dia mahatsapa ho tsy voatosika na natahotra hanome ny heviny. Amin'ny toerana an-tserasera, ny hany sisa ataon'izy ireo dia ny manoratra fanehoan-kevitra hovakin'ny rehetra. Mahazo fotoana ampy handrafetana ny heviny izy ireo ary hizara izany raha tsy efa vonona izy ireo.
Birao fifanakalozan-kevitra an-tserasera manova ny fomba fifandraisan'ny mpianatra sy ny fifandraisan'ny mpampianatra amin'ny mpianatra. Betsaka ny mpianatra amin'ny vanim-potoana niomerika no mahazo aina amin'ny fifandraisana an-tserasera noho ny mifanatrika. Rehefa afaka mifampiresaka amin'izy ireo amin'ny fampiononana ireo mpampianatra dia afaka mahatakatra bebe kokoa ny mpianany sy mizara fahalalana amin'ny fomba mandaitra kokoa izy ireo.
Raleigh's Juniper Level Botanic Garden hanokatra faran'ny herinandro amin'ny 8
Mampiakatra ny fahafantarana ny asan'ny ankizy amin'ny mozika